Alakamisy 07 Novambra 2019. – FJKM
Mamonjy sy manavao ny olony Andriamanitra .Jereo fa:
1-Ampiononina i Rama:
Tanàna any avaratr’i Jerosalema ary làlana lalovana raha avy any Babylona io . Fokon’i Benjamina izay niavian’i Jeremia no ao. Fitomanian’i Rahely renin’i Benjamina no re tao. Asaina mangina izy satria hiverina avy any am-pahababoana. Misy fanantenana ho azy any am-parany . Fa raha mbola hisy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenany .
2-Tsapan’i Efraima ny hadisoany :
Ekeny fa vokatry ny fahotany ny fahababoany (and19). Niaiky izy ary nibebaka . Onena Andriamanitra ka namindra fo taminy. Rehefa miaiky fahotana isika , dia mahatoky Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana.
3-Asaina miverina i Israely .
Ny tànanany taloha ihany no hiverenany . Hanao zava-baovao ny Tompo hahatanteraka izany satria ny vehivavy (Israely) indray no hikaroka lehilahy (Jehovah) . Fatra-piodina izy ireo teo aloha fa ovan’ Andriamanitra ny fony hahatonga azy ho tia an’i Jehovah . Omena fo vaovao ny olona mba ho tia an’ Andriamanitra .